Ngaba Othembekileyo Unokuphila Phakade EParadesi Emhlabeni?
Izigidi zamaKristu zikhangele phambili emva kokufa apho ziya kuvuzwa ngovuko lwasezulwini xa iimoya zabangendawo zijeziswa kwisihogo . AmaNgqina kaYehova, ngokuchaseneyo, akakholelwa emphefumlweni ongapheliyo kwaye baninzi bajonge uvuko lomhlaba apho imizimba yabo iya kubuyiselwa kwimpilo epheleleyo. Phantse wonke umntu uya kuvuswa kwaye anike ithuba lokuba sibonakalise ukunyaniseka kwabo kuThixo, okwenza uYehova abonakale enomdla kunokoThixo wamaKristu amaninzi.
AmaNgqina kaYehova athetha njani ngokuchazwa kweBhayibhile? Ngaba abantu abangakholelwa kuThixo abanokuphikisana namaNgqina kaYehova banokuthetha njani na mabango abo?
Isihogo asiyindawo yokuhlushwa ngonaphakade
Ukungena komntu ngamnye okufumaneka kwi- Insight 's Insight on the Scriptures kwi- encyclopedias kugxininisa amagama amathathu kwiimibhalo zangaphambili eziguqulelwe ngokuthi "isihogo" kwiininzi zeBhayibhile. I-Watchtower Society yeBhayibhile, iNguqulelo Yehlabathi Elitsha yeZibhalo eziNgcwele , ayiguquleli la magama ngesiNgesi. Nantsi indlela uMbutho athi ngayo kufuneka iguqulelwe:
1. I- Sheol ' : ngokwenene' ingcwaba 'okanye "umgodi"
2. I- Hai'des ' : ngokuqinisekileyo "ingcwaba eliqhelekileyo labantu bonke"
3. iGehena : Indawo yangempela, ebizwa ngokuba yiNtlambo kaHinom
Umbutho uthi iShiyoli kunye ne- hai'des zimela ukufa kwangempela, apho umzimba uphela ukusebenza kwaye umntu engakwazi. Oko kuthetha ukuba abafileyo abazi nto baze bavuswe kwaye abahluphekanga nangayiphi indlela.
Emva koko kukho iGehena, emele ukutshabalaliswa ngonaphakade. Nabani na othunyelwe kwiGehena yomfuziselo akayi kuvuswa. Oku kuquka iibhiliyoni zabantu abangengamaNgqina abaya kubulawa eArmagedon kwaye nabani na abangamthobeli uThixo, uYesu, okanye abathanjisiweyo emva kovuko lwenzeka.
Ngaba olu ngcaciso luxhaswa ngamagunya angaphandle?
Abanye benza, ngoxa abanye bengenzi. Unokuqhathanisa nembono yoMbutho kwi-Candy Brauer ukuba ubanjwe kwingxoxo. Kodwa ungalindelanga amaNgqina amaninzi ukuba athathe ilizwi lakhe kuMbutho. Uya kufuneka ugxininise kwezinye iimeko ukuba ufuna ukwenza impembelelo.
Qaphela: ulwazi oluninzi malunga nendlela amaNgqina abheka ngayo Ukuvuswa angatholakala apha.
Ngaba Imfundiso Yovuko YooMbutho?
Imfundiso ibangelwa kwiingxaki ezinzulu xa sicinga inani labantu abaye baphila. Andibonanga nantoni na evela kuMbutho ngoku kutshatyalaliswa kwenani lalo, kodwa iimpapasho zabo ezindala. Kwakukho umshicilelo we-Aprili ka-Apreli ngo-1982 owawucetyiswa ukuba uqikelelo lwama-14 kuya kweebhiliyoni ezingama-20. Kodwa phantse lonke uqikelelo lwesayensi ondifumanayo ngisebenzisa injini ye-Google yophando lubonisa ukuba inani lenene lisondele kwizigidigidi ezilikhulu!
Iplanethi yayiza kukhululeka ukuba ngaba inxalenye yale nombolo yavuswa, kodwa kukho izimpendulo ezithandwayo ngamaNgqina kaYehova:
1. UYehova unokuyenza iplanethi enkulu ngokwaneleyo ukuba ibambe abantu abayizigidi ezilikhulu okanye ngaphezulu.
2. UYehova unokusenza sibe mncinci ukuze wonke umntu afaneleke.
3. UYehova unokusithutha kwiindawo ezininzi.
Ndicinga ukuba nantoni na inokwenzeka ukuba uYehova unamandla onke, kodwa akukona konke oku kwenza ukuba imfundiso ivezwe encinane? Kutheni uYehova akazange athabathe iVukani xa ewenza uMhlaba kuqala? Ngokuqinisekileyo uThixo owaziyo wayeya kuceba ukuba kubekho na ukuba wayekhona kwaye ukuba imfundiso yayiyinyaniso. Xa sicinga ngezinto eziyinkimbinkimbi ezimele zixazululwe, kufuneka umntu avume ukuba uvuko lwasezulwini (okungengokwenyama, olungenziyo) lubonakala njengesisombululo esilula.
Kuyinyaniso ukuba iMboniselo yoMbutho ayikholelwa emphefumlweni ongafiyo, kodwa abantu banako ukuya ezulwini. Uninzi lwabathathiweyo "inxalenye yekhoboka" yamaNgqina (ebizwa ngokuba yi-144,000) sele sele ilawula njengabaokumkani kuhlangothi lukaYesu. (Emva kokuba uThixo ethatha ingqalelo yabo kwaye uyifakela kulo "uhlobo lomzimba" lwasezulwini) Omnye uyazibuza ukuba kutheni uYesu angabibizi sonke ukuba siye ezulwini kunokushiya wonke umntu apha emhlabeni.
Ngaba akukho ndawo eyaneleyo ezulwini? Ngokuqinisekileyo uThixo unokuza ngendlela engcono.
Isimo sovuko soMboniselo weMboniselo sihlamba xa uqala ukubuza imibuzo emininzi. Omnye unokuphikisana nokuchazwa kweBhayibhile, kodwa isizathu sodwa senza ukuba imfundiso ibe yintsingiselo encinane. Njengamanye amankolelo enkolo, unokwenqaba njengengqiqo okanye uthemba ukuba yonqulo yonamandla ingayisebenzela yonke into ekupheleni.
Impembelelo Yoovuko loMbutho WeNhlangano
Abaninzi abangakholelwayo kuThixo banomuvo wokuthi uThixo, njengoko uchazwe eBhayibhileni, unonya kakhulu ukufanelwa unqulo lwethu nokuba ukhona. Siyazibuza ukuba ubani unokuthi ulungele ixesha elingunaphakade lokuhlushwa ngenxa yokuphila kwesono kuphela. AmaNgqina kaYehova abuye abuze lo mbuzo kwaye impendulo yabo kukunciphisa isijeziso sikaThixo sendawo engendawo yomlilo esihogweni ukusababulala ngokuthe ngqo. Xa sele anqwenela ukumthobela ngokupheleleyo, uya kukubulala kwakhona kwaye yindlela ohlala ngayo. Ingxaki ixazululwe.
Ngaba oku kwenza ukuba uThixo abonakale enomdla okanye enothando ngakumbi? AmaNgqina kaYehova athetha ukuba uThixo makawabulale abo bangayi kuthobela imithetho yakhe kuba baya kwenza nzima ukuba bathembeke kwiparadesi, kodwa akusiyo imilinganiselo emibini? Ukuba amaNgqina ekulungele ukukholelwa ukuba uThixo unokukwazi ukuphumeza zonke iingxaki ezikhankanywe kwicandelo langaphambili, ngokuqinisekileyo bakholelwa ukuba uThixo unamandla okwanele ukuvuselela ababi? Kutheni ungabathuthuli kwelinye ihlabathi apho angabelana nabo ngokubanzi? Ukuba uThixo onamandla onke ukhona ngokwenene, ngoko unako ukwenza oku.
Iindlu aziyi kuzama.
UYehova onamaNgqina kaYe- hova akanokuba nobugwenxa njengalowo wayebhekiselwe ngamaKristu athile, kodwa uthanda ukudlala intandokazi. Abantwana bakhe abalungileyo baya eZulwini, abantwana bakhe abalungileyo baphila ngonaphakade njengabantu abangaphelele kwiparadesi (ixesha elide beliphulaphule), kwaye abantwana bakhe abanzima kakhulu baphonswa ngaphandle ukuze angabe esabakhathazeka nabo. Ingaba oku kuphuculwe ngokwenene?
Ukholo lukaSara Palin
I-Brake ne-Clutch Pedal Adjustment - Ubukhulu kunye no-Free Play
Umehluko phakathi kweFür kunye nakwiiJamani
Yiyiphi i-programa Qhagamshelana neSeguras que Trump reactivó
Iimifanekiso zeMidlalo eziPhambili zeMidlalo
Barotrauma yePulmonary kunye neScuba Diving
Yintoni uMthendeleko weCorpus Christi?
I-Ghazals, iiNtsomi eziLutshwayo ezifutshane eziLungisa iMveli yaseArabhu neMelika
Ukukhethwa kweCounter Smart Cue
IiPirate eziPhezulu zePirate
Hlangana ne-Abstract Noun